HOT SALE: RUBBER RAKAKOMEDZWA METALI
We akasimbisa rabha zvemapuranga simbi dhipatimendi muna 2005, panguva iyoyo gore, isu kupinza anokosha equipments kubva France, Germany uye Japan. Muna 2011, kambani zvinobudirira yakatanga rabha zvemapuranga simbi ematongerwo bhodhi mu China, uye akasimbisa wokutanga zvoga rabha zvemapuranga simbi Coils S ...
KUPASIRA MOTO KUEDZWA KWEMA API STANDARD 6FB
Kubudirira kukuru kweiyo isiri-asbestos fiber mhando chigadzirwa kupasa bvunzo yemoto yeAPI Standard 6FB, Yechina Edition, 2019 musi waMarch 5, 2021. Muedzo wakaitwa neYarmouth Research uye Technology, LLC, inova ine chiremera uye nyanzvi yekuongorora moto lab munyika. Th ...
SUPERIOR KUZIVA SOLUTIONS, MHANDO DZESE DZESIMBISO MATERIALS
Kuiswa chisimbiso zvinhu zviri zvechengetedzo uye mhando muhupenyu hwazvino pasirese. Wedu chirimwa gasket zvinhu mugadziri weasina-asbestosi fiber sheet mhando uye rabha yakavharwa simbi mhando. Tine nhoroondo refu yekuburitsa uye kusimudzira yekuisa chisimbiso zvinhu kubva 1991. Zvino isu tiri ...
TAKASIMBA zvakagadzirwa gobvu rabha bemhapemha rabha Coated METAL Coils
Gobvu rabha unhani zvinhu zverabha zvakaputirwa simbi rinoumbwa zvichibva nechando-yakakungurutswa simbi ndiro neNBR yerabha kupfeka pamativi ese neepamberi yekugadzira tekinoroji. Iyo inokodzera kuvhunduka kwekumwa shims, ruzha damping shims, vibration damper ye brake system uye chitubu chishongedzo, nezvimwe It '...
Injini cylinder musoro gasket unopisa uye compression system mweya leakage kazhinji kukundikana. Cylinder musoro gasket kutsva kuchanyanyisa kushatisa mashandiro einjini, kana kutotadza kushanda, uye zvinogona kukonzera kukuvara kune zvimwe zvine hukama zvikamu kana zvikamu; mukumanikidza uye nesimba strok ...
Chii chekuteerera kana uchiisa iyo humburumbira musoro gasket
1. Kusanzwisisika Synthetic rubber inogona kuchinja chimiro chayo semvura. Ehe, haigone kuyerera. Kana simba rekusvina rinomanikidza kushanduka kwaro rikanyangarika, rinogona kudzokera pachimiro charo chepakutanga (kureva kuti, iro gasket harichinje panguva yekumanikidza. Chinja, ...
Kana iyo cylinder musoro gasket yakakuvara kana isina kusimbiswa zvakanyanya, injini haigone kushanda zvakajairika uye inofanira kutsiviwa nekukasira. Nhanho dzakananga ndeinotevera: 1. Bvisa vharuvhu uye gasket. 2. Bvisa vharuvhu rocker ruoko gungano uye tora vharuvhu kusunda tsvimbo. 3. Zvishoma nezvishoma sunungura ...
Iyo gasket chikamu chechidimbu chekuisa chisimbiso chinogadzirisa "kumhanya, kubuda, kudonha, uye kubuda". Sezvo paine akawanda akamira ekuisa chisimbiso zvivakwa, zvinoenderana aya emhando yekuisa chisimbiso mafomu, sandara magasketi, elliptical gaskets, lens gaskets, koni gaskets, emvura gaskets, O-mhete, uye dzakasiyana siyana -...
Kana mota ikatyoka ichityaira, kune zvikonzero zvakawanda zvekutadza, uye chikamu chega chingatadza. Chii chichaitika kune iyo cylinder musoro gasket kutadza? Iyo yakazara mamiriro ezvinhu achapihwa kwauri nemugadziri wedu. Rega ndigozvizivisa. Nekuti iyo humburumbira gasket ine basa re sealin ...
Maitiro ekutonga iyo humburumbira musoro gasket yakatsva
Basa hombe re humburumbira gasket kuchengetedza chisimbiso kwenguva yakareba uye zvakavimbika. Inofanira kunyatso simbisa iyo yepamusoro-tembiricha uye yakanyanya-kumanikidza gasi inogadzirwa musilinda, inofanira kusimbisa iyo inotonhorera mvura neinjini oiri neimwe kumanikidza uye kuyerera mwero inopinda mu ...
Zvekuita kana paine dambudziko neiyo cylinder musoro gasket
Kana iyo cylinder musoro gasket yakakuvara kana isina kusimbiswa zvakanyanya, injini haigone kushanda zvakajairika uye inofanira kutsiviwa nekukasira. Nhanho dzakananga ndeinotevera: 1. Bvisa vharuvhu uye gasket. 2. Bvisa vharuvhu rocker ruoko gungano uye tora vharuvhu kusunda tsvimbo. 3. Sunungura uye bvisa ...
Iyo kambani inotora yepasirese dhizaini dhizaini dhizaini nekugadzirisa matekiniki uye inoita yepakutanga hunyanzvi.
SUPERIOR KUZIVA SOLUTIONS, MHANDO DZESE DZE ...
TAKADZIDZIRA INOOVATED PAKUKWANZA RUBBER KUFUKIRA RU ...
Asiri Asbestos Gasket Sheet, Asiri Asbestos Rubber Sheet,